ဂျပန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
Loading ... ဂျပန်တွင်လောင်းကစားဝိုင်း၏ဥပဒေများသည်အလွန်တင်းကြပ်ဖြစ်ပြီး, ယခုလောင်းကစားဝိုင်းကသာအနည်းငယ်ပုံစံများဥပဒေရေးရာဖြစ်ကြသည်။ 1907 ကတည်းကလောင်းကစားများ၏သာတရားဝင်ပုံစံများကိုမြင်းပြိုင်ပွဲ, စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ, မော်တာနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားပေါ်တွင်လောင်းကစားနေကြသည်။ ဤအဂိမ်းများကိုဖျော်ဖြေမှုကြောင့်အချို့မှာတော့ထိုကဲ့သို့သော mahjong, pachinko နှင့်ဘင်ဂိုကစားအဖြစ်ဂိမ်းကိုလည်းပိုက်ဆံအဘို့ကစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ဖဲချပ်များနှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအပါအဝင်အားလုံးသည်အခြားအလောင်းကစား, ဂျပန်အတွက်တရားမဝင်ဖြစ်ကြသည်။ ကစားသမားများမကြာခဏရှိတစ်ဦးလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားရန်မကာအိုသွားပါ။
ဂျပန်တွင် Lotto 1630 ကတည်းကတည်ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ပင်ဘင်ဂိုကစား 1842 နဲ့စတင်ပြီးတစ်ဦးသည်အချိန်ပိတ်ပင်ထားခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏အဆုံးမှာ 1945 အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထီပွနျလညျထူထောငျခဲ့သညျ။ ဒါဟာ Lotto ကနေဝင်ငွေတိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ဂျပန်မြို့တော်ကိုပွနျလညျထူထောငျခဲ့ကြသည့်အခါအစိုးရကထီဖွင့်မပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ထိပ်တန်း 10 ဂျပန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
ဂျပန်တွင်နောက်ဆုံးရသတင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရရှိရန်ဎအဆိုအရ, ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတရားဝင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူဧပြီ 2013 အတွက်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့်ဥပဒေကြမ်း, ကျယ်ပြန့်သောနိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုရှိပါတယ်။ ဘောလုံးလောင်းကစားများ၏ဥပဒေရေးရာကိုလည်းဂျပန်အစိုးရ၏အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ နှင့်အညီ, နောက်ဆုံးတော့ 2016 အတွက်ဂျပန်၏ပါလီမန်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏တရားဝင်အတည်ပြုခြင်း, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှအတွင်းအများဆုံးလောင်းကစားဝိုင်းတပါးအမြိုးသားတစျဦးနဲ့အလုပ်လုပ်စတင်ရန်မစောင့်နိုင်ပါ။
ဘောလုံးပွဲစဉ်များနှင့်အလောင်းအစားအပေါ်ကစားနည်း4သီးခြားအားကစားအပေါ်ခွင့်ပြုခဲ့အဖြစ်ဂျပန်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစား၏ဥပဒေများနှင့်အညီ, ဂိမ်းခိုင်လုံသောအမြင်, ဘင်ဂိုကစားဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်အစိုးရသည်နိုင်ငံအတွင်းရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်လိုင်စင်ချထားပေးရန်မထားဘူး။ အစိုးရကလည်းနိုင်ငံခြားအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များသုံးစွဲဖို့ဂျပန်ကစားသမားတားမြစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးသောနေရာများ၌ရှိသကဲ့သို့, ကစားသမားနေဆဲအွန်လိုင်း play ပါလိမ့်မယ်။
တခြားနိုင်ငံတွေထဲတွင်နေရာဂျပန်ကစားသမားများအတွက်က်ဘ်ဆိုက်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအစိုးရကကခက်ခဲသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စေသည်။ အစိုးရက site ကိုနေရာများတွင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်တွင်ကစားသမားဤဆိုဒ်များသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ထိုသို့သောအင်တာနက်ကဖေးအဖြစ်အများပြည်သူအရပ်တွင်ကစားရန်မဟုတ် သာ. ကောင်း၏။ အဲဒီအစားကစားသမားအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်များဝင်ရောက်ဖို့၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများကိုအသုံးပြုရပါမည်။
ဂျပန်ကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့်ကစားသမားများရရှိနိုင်ပါသည်ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
ထိုသို့လူသိများသည် လောင်းကစားဝိုင်းဂျပန်တွင်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ပြည်နယ်အဆင့်မှာ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေအတွက်သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးရှိပါသည်။ သို့သော်ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာ, သင် (အဓိကအားဖြင့်အားကစားလောင်းကစားအတွက်) နှုန်းအတော်ကြာအမျိုးအစားများကိုမကစားနိုင်ပါတယ်နှင့်ထီတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာသို့တိုက်ရိုက်ငွေကိုဆောင်ခဲ့နှင့်တင်းကြပ်စွာကွဲပြားခြားနားသောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကကြီးကြပ်, အထူးဥပဒေများကို၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ကျဆင်းနေသောကြောင့်ဂျပန်၌ထိုသို့သောလောင်းကစားဝိုင်း, ဥပဒေရေးရာတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။
ဂျပန်တရားဝင်လောင်းကစား - တစ်ခုဖြစ်သည် Koei kyogi (အများပြည်သူစကိတ်စီးခြင်း)
အတော်ကြာအခြေခံမျိုးရှိပါတယ် Koei kyogi ။ သူတို့တွင်: ခုန် - keiba ပြိုင်ကားမော်တော်ဘုတ် - kotei , စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ - keirin , မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်တူသောပြိုင်ကား။ အားကစားလောင်းကစားလောင်းကစား - ဂျပန်ဟာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဥပဒေများချိုးဖောက်မပါဘဲမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေနိုင်သလဲဆိုတာ။ အားလုံးကစားနည်းပြည်နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ kontrolirliruyutsya ။ ဒီလောင်းကစားကနေပဲအမြတ် margin ဖြစ်ပါသည် - ဒါဟာအားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်နှုန်းထားများများအတွက်လက်မှတ်များ၏ရောင်းအားအနေဖြင့်စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ၏ 80% ကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထီလက်မှတ်တွေကံဇာတာ - takarakudzi (takarakuji) ပုံမှန်အားဖြင့်ထီကောက်ယူသည်အဘယ်မှာရှိအဓိကမြို့ကြီးများ၏သေးငယ်တဲ့စျေးဆိုင်များတွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ထီအချို့ရက်ကျင်းပကြသည်။ ခရစ္စမတ်ထီလက်မှတ်တွေ Mizuho ဘဏ်မှာသီးသန့်ရောင်းချကြသည်။ သူတို့ဟာပြီးတော့ပြန်လည်ရောင်းချသူများပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဂျမ်ဘို Nenmatsu Takarakuji (takarakudzi) ထီ၏တစ်ခုတည်းသောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဓိကဆုတစ်ဆယ်သန်းယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ပညတ်တရားအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောထီကနေအမြတ်အစွန်းများ 50% ကိုမေတ္တာနှင့်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာတိုက်မှပေးပို့ရမည်။ ဂျပန်ထီ အတော်ကြာအမျိုးအစားများရှိနိုင်ပါသည်။ ကဒ်များနှင့်အတူအခြေခံအားဖြင့်ဒီလိုင်စင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်, ဂဏန်းမူကွဲများနှင့်ရိုးရာကစားနည်းများ။ တစ်ခုချင်းစီကိုလက်မှတ်များ၏စျေးနှုန်း 100 ထံမှ 500 ယန်းဖို့အကွာအဝေး၌တည်ရှိ၏။
Pachinko တစ်ဦးဒေါင်လိုက် Pinball တူဖြစ်သောဂိမ်းစက်, ဒါခေါ် slot ကအပေါ်ဂိမ်းကိုခေါ်ပါ။ တစ်ခုခြွင်းချက်အဖြစ်တရားဝင် pachinko လောင်းကစားဝိုင်းမှဆက်ပြောသည်မပေးပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်သမိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်ထိုသို့ပွုပါပွီ။ pachinko slot ကစက်တွေနဲ့အတူခန်းမ ပုဂ္ဂလိကဂျပန်တစ်လျှောက်လုံးပျံ့နှံ့အဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်ဧည့်သည်များခန်းမအားဖြင့် operated နေ့တိုင်းပိုပြီးဒေသခံလူဦးရေနှင့်ခရီးသွားဧည့်များ၏ထက်ဝက်ကျော်ဖြစ်လာမည်။
တစ်ဂိမ်းထဲမှာ pachinko သံမဏိ၏သေးငယ်တဲ့သတ္တုဘောလုံးအနိုင်ရရန်လိုအပ်ပေသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစေ့၏အချင်းအတိအကျ 11 မီလီမီတာ။ အဆိုပါလေးယန်းနှင့် ပတ်သက်. ဂျပန်အတွက်ဘောလုံးတဦး၏စျေးနှုန်း, ဒါပေမယ့်ကစားသမားသေးငယ်တဲ့အမှုအရာမဟုတျပါ, များသောအားဖြင့်တစ်ချိန်ကတထောင်ယန်းယူ။ ဒီဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့မြန်နှုန်းထိခိုက်စေသောအထူးကိရိယာ၏အကူအညီဖြင့်အဆိုပါရည်မှန်းချက်သို့ဘောလုံးပေးပို့ဖို့ဘောလုံး၏လမ်းကြောင်း, ထိခိုက်အားလုံးအတားအဆီးများ၏အစုကိုတဆင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက် - ဘုတ်အဖွဲ့စက်ပေါ်မှာအနိုင်ရအိတ်ကပ် pachinko။ လုံခြုံစွာအားလုံးအတားအဆီးကိုကျော်လွှားအများစုကဘောလုံးဆင်းကျလိမ့်မည်နှင့်စက်အတွင်းပိုင်း, ကစားသမားမဆိုဆုကြေးငွေဆောင်ကြဉ်းမည်မဟုတ်။ ဒါပေမဲ့တချို့ဘောလုံးနေဆဲစက်ကိုသက်ဝင်သောအိတ်ကပ်ထဲသို့ကျလိမ့်မည်ကဆုချီးမြှင့်ပေးသည်။ အဆိုပါအနိုင်ရ - အတူတူဘောလုံးအထူးအကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာအလိုအလြောကျသွန်းလောင်းနေကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤဘောလုံးဟာဆုနှင့်ဆုများအတွက် box office မှာလဲလှယ်နိုင်ပါတယ်အကြာတွင်လျှို့ဝှက်ချက်အတွက်ကစားခန်းမများ၏အနီးတစ်ဝိုက်ရှိငွေလဲလှယ်ကြသည်။ အဆိုပါအန္တရာယ်ရှိခြယ်လှယ်အဖြစ်အနိုင်ရရှိတဲ့အတူဒီဂိမ်းကိုပိတ်ပင်ခဲ့ရာဂျပန်ဥပဒေ, deception သည်အခြားအကြောင်း, ဤသည်အနုစိတ်အစီအစဉ်။ ဒါပေမယ့်အစီအစဉ်ရှည်လျားအောင်မြင်စွာတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံး operating ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Pachisuro - ကဂန္စက် pachinko ပိုမိုခေတ်မီခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအခြားနိုင်ငံများတွင် slot ကစက်တွေရန်အလွန်ဆင်တူဖြစ်ကြပြီးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ဖြန့်ဝေ pachinko ။ အဆိုပါဂျပန်ပေါ်မှာကစားကြောင်းယုံကြည် pachisuro အနိုင်ရအလွယ်ကူဆုံး။ slot စက်တွေမပြတ်ဆုထွက်ပေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအဘို့အကျော်ကြား pachisuro ။ ပင်သေးငယ်တဲ့ဆုပါလျှင်, ထိုအရပ်၌နီးပါးအမြဲဖွင့်နှင့်အဘို့ဂျပန်ကိုပိုနှစ်သက် pachisuro တခြားဂိမ်းစက်တွေအစားထိုးလိုက်ပါ။
ဂျပန်တွင် Yakuza မျိုးနွယ်စုများနှင့်တရားမဝင်လောင်းကစား
ဂျပန် Yakuza, သူတို့ကလည်းရာဇဝတ်အုပ်စုများဖြစ်ကြသည်လောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအဆောက်အဆံ့ - သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ၏အဓိကလမ်းညွန်တဦး။ တစ်ခုသာခမ်းနားစကေးနှင့်ငွေပေါ်အလေးအနက်ထားအဲဒီမှာကစားခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရာလောင်းကစားဝိုင်းအပြင်: ကတ်များကစားတဲ့တရုတ် Mahjong အတွက် pograt နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဂျပန်ကတားမြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း, အရင်းအမြစ်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်ကြောင့်ချင်တယ်ဆိုရင်, ကစားသမားများလွတ်လပ်စွာက virtual ကစားတဲ့လှည့်နိုင်သောနေရာ, နိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲဥပမာ, -www.igrovoyzal.com တိုက်ရိုက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဂျပန်သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာနေမကောင်းချောက်ကမ်းပါးပေါ်ရှိပါတယ်။
ဂျပန်အတွက်မကြာသေးမီအချိန်အတွက်အပန်းဖြေဒေသများရှိဘုတ်အဖွဲ့နှင့်စာရေးကိရိယာလောင်းကစားရုံအပေါ်တစ်ဦးရေပေါ်ကာစီနိုတည်ထောင်ရန်ဆွေးနွေးမှုများစတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဂျပန်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပါတီ စီမံကိန်းဘက်ပေါင်းစုံအပန်းဖြေလောင်းကစားရုံအဆိုတင်သွင်း။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားဂျပန်နိုင်ငံအတွက်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်အချိန်အတွက်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ စီမံကိန်းတည်ထောင်သူကြောင်းငြင်းခုန် အဆိုပါလောင်းကစားရုံတရားဝင် ဂျပန်သတ်မှတ်ထားသောဧရိယာများတွင်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေး၏မျက်နှာသာအတွက်ခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ယူဆရလောင်းကစားဝိုင်းဇုံတိုင်းပြည်များ၏ဘဏ္ဍာထဲသို့စီးဆင်းမည်အမြတ်အစွန်းများပြည်နယ်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဂျပန်က virtual လောကကိုချစ်သောသူ။ သူတို့ကအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းထဲမှာကို virtual ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပင်ညာဘက်ကွန်ယက်အတွက်တစ်မိသားစုကိုစတင်ရန်, ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်းအချိန်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏဖြုန်းဖို့ပျော်ရွှင်ကြသည်။ သို့သော်အချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်, အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများကဲ့သို့ကမ္ဘာကြီးကိုဖျော်ဖြေရေးလျှောက်လုံးကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်တွင်အမြစ်မယူနိုငျသညျ။
အဆိုပါဂျပန်များမှာ သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်လူသိများအချို့သတိနဲ့တိုင်းပြည်အနည်းငယ်က virtual လောင်းကစားရုံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရှိသည်ရှေးခယျြမှုသေးငယ်သည်။ တိုင်းပြည်ကအင်တာနက်ဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်း, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်သော်လည်း, သင့်လျော်သောအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီမထားပါဘူး။ ထိုရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအရာဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကတွင်လေ့လာတွေ့ရှိအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားကလပ်များ၏အမြောက်အများ၏ပထမဦးဆုံးမူပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အာရှမှာတော့အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတော်လေးမကြာသေးမီကဖြန့ ်. , တစ်ချိန်တည်းမှာ, နောက်ဆုံးသောလေးနက်သောဘဏ္ဍာရေးကျောထောက်နောက်ခံဖမ်းမိနှင့်ဂျပန်အော်ပရေတာတစ်ဦးလမ်းဆုံကနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်တော်မူပြီးမှ, အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသခံပရိသတ်ကို, ရန် "ချဉ်းကပ်ဖို့" ဘယ်လို သိ. ကြပြီမဟုတ် အနောက်မျက်နှာမှ။
ဒါဟာဂျပန်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ၏လယ်ပြင်တွင်အတွေ့အကြုံအရလွယ်ကူသည်မဟုတ်ကြောင်းလူသိများသည်။ ဒေသခံစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်ဖို့စီမံခဲ့ကြသူများသည်အော်ပရေတာအတော်လေးတံခါးပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့အတွေ့အကြုံဖလှယ်အတွက်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဆောင်သွားရန်ဒီခေါင်းစဉ်, ပြဿနာသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်များအပေါ်တစ်ဦးညီလာခံကျင်းပရန်အဘယ်သူမျှမစိတ်သဘောထားရှိပါတယ်။
Yuiga Sano ဂျပန်အွန်လိုင်းဂိမ်းစျေးကွက်၏ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး , ဒီဒေသမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အသိပညာမျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိနေသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအနည်းငယ်အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုအဘို့အ Yuiga Sano အဆိုအရ, ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရမယ်:
1 ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ site ပေါ်တွင်, ဂိမ်းများအပြင်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများနှင့် capacious နှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာရှိရပါမည်။ အသုံးပြုသူကိုသင်ပင်ကစားမရှိဘဲသင်၏အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်ရှိရာ site တစ်ခုအဖြစ်အွန်လိုင်းကလပ်ကိုလက်ခံရပေမည်။
2 ။ အဆိုပါ site ကို (စသည်တို့ကို Tweeter များ, Facebook,) လူမှုကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရပါမည်အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါသည်
3 ။ က virtual လောင်းကစားရုံဧည့်သည်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်သည်သာမက, ဒါပေမယ့်လည်းကလပ်များ၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူထိတွေ့စောင့်ရှောက်ဖို့ရှိရာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိသင့်ပါတယ်။
4 ။ ကြော်ငြာပေါ် skimp မထားပါနဲ့။ သငျသညျ, ဥပမာ, ဆိုက်ဖို့ဖိတ်စာ၏မေးလ်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
5 ။ အဆိုပါ site ကိုကလပ်၏စစ်ဆင်ရေး၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အဖြစ်ဂိမ်း၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်အတူစာမျက်နှာမဆံ့သငျ့သညျ။
6 ။ ဒါဟာသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့မည်သို့ခြေလှမ်းလမ်းညွှန် (ဖြစ်နိုင်ရင်ဗီဒီယို) တို့ကတစ်ဦးခြေလှမ်းနှင့်အတူကလပ်များတွင်အသုံးပြုသည့်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များနေရာလိုအပ်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်, များစွာသောဂျပန်ထိုကဲ့သို့သော« PayPal »နှင့်« NETELLER »အဖြစ်ရေပန်းစားငွေပေးချေမှုစနစ်များ, ကျွမ်းတဝင်မရှိကြပေ။
7 ။ ဒါဟာလက်တင်အက္ခရာ၏အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ယေဘုယျအားဖြင့်အွန်လိုင်းမှကလပ်သဘောတရားများကိုဂျပန်အစဉ်အလာများနှင့် Canon အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။
ခုနစျပါးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါ Yuiga Sano သငျသညျဂပြနျအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ၏ဖန်တီးမှုကဲ့သို့သောခက်ခဲတာဝန်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကို virtual ကလပ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကြောင့်မြှင့်တင်ရန်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ သို့သျောလညျးကို virtual ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများရုရှားအော်ပရေတာလည်းအောင်မြင်မှုဟာသူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များရှိသည်။ စာမျက်နှာတွင် http://777vulkan-kazino.com/vulkan-udachi ဥပမာရုရှားအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားကလပ်တွေထဲကသွားရောက်ကြည့်ရှုလျက်, စီစဉ်ယင်း၏အသုံးပြုသူများအဘို့ပြင်ဆင်ကြမည်မျှအံ့သြဖွယ်သေချာအောင်နိုင်ပါတယ်။ © imago
လောင်းကစားဝိုင်းတင်းကြပ်စွာတိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားများ၏မကြာမီတရားဝင်များ၏ပြဿနာကျော်နေချိန်မှာဆဲသွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံတားမြစ်ထားသောနှင့်တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအခါအားလျော်စွာတရားမဝင်လောင်းကစားများကို virtual အာကာသအတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့စီးနင်းမှုများနှင့်ဖုံးလွှမ်းသည်အဘယ်မှာရှိဂျပန်အတွက်အမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါဆိုရမှာပါ။
မကြာသေးမီကနှစ်လအကြာသကဲ့သို့, ဂျပန်အစိုးရ၏အတွက်အစီအစဉ်အပေါ်တရားမဝင်အပေါ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိ ဂျပန်တွင်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ ။ တိုင်းပြည် Combat ဖှဲ့စညျးရာဇဝတ်မှုများအတွက်ဦးစီးဌာနအလေးအနက်ထားဒီထင်ရသောသေးငယ်တဲ့အရာပါသည်။ ထိုသို့သောထင်ရသောအသေး, ဖျော်ဖြေရေးများ၏လှုပ်ရှားမှုများ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်, ဂျပန်ဘဏ္ဍာတိုက်အတော်လေးသိသိသာသာပိုက်ဆံ funneling, ထိုအထဲကလှည့်။
တစ်ဦးတရားမဝင်ဖွင့်တဲ့သူစမ်းသဘောငွေပမာဏပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ ဂျပန်ကအင်တာနက်ထဲမှာလောင်းကစားဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဒါကြောင့်အရေးတကြီးသီးသန့်တရားမဝင်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများထိတွေ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်လို့သီးခြားအထူးအဖွဲ့ကိုစုစည်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတိုက်ဖျက်ရေးတို့အတွက်ဂျပန်ရဲ့ဦးစီးဌာန၏အခြေခံပေါ်မှာ, အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားလူတွေပါဝင်သည်။
အဆိုပါအမှု၌သာလျှင်လက်, ကျွမ်းကျင်သူများကိုချက်ချင်းကြောင့်ကနဦးထင်ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ တရားမဝင်လောင်းကစားအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အမြစ်များကိုအရမ်းနက်ရှိုင်း သွား. နှင့်ချိုးဖောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အရာရှိများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအပါအဝင်များစွာသောသြဇာကလူဖြစ်ကြသည်။ ဂျပန်အာဏာပိုင်များ၏အထက် echelons တားမြစ်ထားသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံများဒီ "အိမ်ခေါင်မိုး" ၏ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကိုအလွန်ရေးရာ၏ဤအလှည့်အားဖြင့်မသိနိုင်ဖြစ်ကာခဲ့ကွောငျးအထူးအုပ်စုတစ်စု၏လုပျငနျးရှုပ်ထွေး။ အခုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးများ၏တာဝန်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားရာထူး၏ကျူးလွန်သူဖော်ထုတ်သင့်ပါတယ်။
အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှစိတ်ဝင်စားဖို့, တက်ကြွအကူအညီများအဘယ်အရာကြပါပြီဖြစ်ပါတယ် ဂျပန်ဥပဒေရေးရာအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏အော်ပရေတာ ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များကိုအောက်မှာအရာအချို့ဂိမ်းက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပုံစံတည်ရှိ။ အထူးအုပ်စုတစ်စု၏ဦးခေါင်းကို virtual လောင်းကစားများ၏မှောင်ခိုဈေးကွက်ကိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသူတို့၏ရိုးသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှဝင်ငွေခိုးယူဆိုတဲ့အချက်ကိုဖွငျ့ဤတက်ကြွသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကရှင်းပြသည်။ သူလည်းဖြစ်ရပ်များ၏သင်တန်းတွင်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ဥပဒေရေးရာအော်ပရေတာများ၏အလှူငွေတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပြီးအလေးအနက်ထားစုံစမ်းစစ်ဆေးကူညီသင့်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ကိုယ်ကို virtual ကလပ်ကတိတော်များကိုအလေးအနက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ထုတ်တရားမဝင်ပြိုင်ဖက်သည်။
စိတ်အားထက်သန်မှု၏ဂျပန်ကိုမှန်ကန်ရာဇဝတ်မှုအတွက်အတောအတွင်းအနာစိမ်းတစ်ဦးကို virtual အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆော့ကစားရန်အခွင့်အလမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစား၏လယ်ပြင်တွင် မီးတောင်လောင်းကစားရုံ နာမည်ကျော်အွန်လိုင်း slot နှစ်ခုပေါ်မှာ။
0.1 ထိပ်တန်း 10 ဂျပန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
2.3 ဂျပန်တရားဝင်လောင်းကစား - တစ်ခုဖြစ်သည် Koei kyogi (အများပြည်သူစကိတ်စီးခြင်း)
2.6 ဂျပန်တွင် Yakuza မျိုးနွယ်စုများနှင့်တရားမဝင်လောင်းကစား
2.7 ဂျပန်တွင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ Legal